किन लगाइन्छ साहिँली औँलामा औँठी ? | Jukson
स्वयम्वरको औँठीलाई प्रेमको प्रतिक मान्ने गरिन्छ । यस्तो प्रतिज्ञा तथा बाचा जसलाई दुइजना मानिसले एक अर्काप्रति समर्पण गर्दछन् । एक बन्धन जसलाई जिवनभर कायम राख्ने कसम सँगै पहिरिन्छ ।
तर के तपाइँले थाहा छ, स्वयंवरको औँठी किन सधै साहिँली औँलामा मात्रै किन लगाइन्छ ? कतिपय फिल्ममा देखाइन्छ की साहिँली औँलाको सम्बन्ध सिधै मुटुसँग हुन्छ, त्यसैले साहिँली औँलामा औँठी लगाउँदा त्यसलै सिधै मुटुमा प्रभाव पार्दछ । तर के यस्तो मान्यता सत्य हो त ? वा साहिँली औँलामा औँठी लगाउनुका अन्य कारण छन् ? यसबारेमा जानौँ ।
हातको साहिँली औँलामा औँठी लगाउनुका पछाडि रोम सभ्यताको एक मान्यता रहेको छ । यो मान्यता निकै पूरानो हो । साहिँली औँलाबाट एउटा स्नायु सिधै मुटुसम्म पुगेको हुन्छ भन्ने मान्यता रोममा छ । त्यसैले औँठी आफुले लगाउन वा पि्रयतमलाई लगाइदिनका लागि यहीँ साहिँली औँलाको प्रयोग गर्ने चलन रोम सभ्यताको सुरुवात देखि नै चलिआएको हो । यो सबैभन्दा पूरानो र लोकपि्रय मान्यता हो ।
अनलाईन खबर डट कम बाट
नाइकले ल्यायो आफै तुना कसिने स्मार्ट जुत्ता (भिडियोसहित )
अहिलेसम्मकैै शक्तिशाली स्मार्टफोन, २१ मेगापिक्सेल क्यामरा
सडकको मर्मत सम्भारलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड